धरान र काठमाडौंको लौरोभन्दा जब्बर डिलासैनीको पुतली, यसरी सम्भव भयो सन्तोषको लोभलाग्दो जित – Nepal Press
धरान र काठमाडौंको लौरोभन्दा जब्बर डिलासैनीको पुतली, यसरी सम्भव भयो सन्तोषको लोभलाग्दो जित
२०७९ जेठ ९ गते १९:३८
काठमाडौं । स्थानीय तह चुनावको अघिल्लो दिनसम्म बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाका जनताले कसलाई निर्वाचित गराउलान् भनेर संशय थियो । एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो । अर्कातिर थिए, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोषप्रकाश जोशीको टिम ।
एमाले र कांग्रेसले व्यापक चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहँदा उता सन्तोषको टिम पनि आफ्नै तरीकाले चुनावी प्रचारमा खटिएको थियो । आफ्ना एजेन्डाहरू जनतामाझ राखिरहेको थियो । अन्ततः चुनाव भयो । जनताले पार्टीलाई छाडेर स्वतन्त्र उठेका सन्तोषलाई आउँदो पाँच वर्षका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षका रूपमा चुने ।
सन्तोषको स्वतन्त्र उम्मेदवारी र विजय यात्रा सहजै बनेको थिएन । सन्तोष र उनको टिमले प्राप्त गरेको सफलताको कथाको पछाडि अरू उपकथा धेरै छन् । सन्तोषको उम्मेदवारी घोषणा पार्टीबाट टिकट नपाउँदा सुरु भएको विश्लेषण हुने गरे पनि उनले त्यसअघि नै त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनताको मत जितिसकेका थिए ।
एमाले पार्टीले आफूलाई सिफारिस गर्नेमा ढुक्क थिए ३५ वर्षीय सन्तोष । उनले गाउँमा गरेको काम, जनताको सामुन्ने उनले प्राप्त गरेको लोकप्रियता उनले टिकट पाउनुपर्ने मूल तत्त्व थिए । उनको पार्टी एमाले मात्रै नभएर अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि सन्तोषले पालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, पालिका कमिटीले उनलाई टिकटका लागि सिफारिस नै गरेन ।
यसको मूल कारण थियो, एमालेका बैतडी जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र पालसँग सन्तोषको खराब सम्बन्ध । गएको जिल्ला अधिवेशनका वेला फरक प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्न खोजेका थिए उनले । तर, पालले सहमतिबाट नेतृत्व चयनका लागि भन्दै सन्तोष लगायतको टिमलाई बाहिर राखेर जिल्ला कमिटी बनाए ।
तर कथा यो भन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको थियो । डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र सिफारिस समितिले पालिकाको नाम डिलासैनी र केन्द्र वडा नम्बर ७ धामी गाउँमा राख्ने भनेको थियो ।
यसपछि ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि सोही अनुसार गर्ने निर्णय गरे । निर्णय मात्रै भएन । त्यहाँ डिलासैनी भगवती मन्दिरमा गएर कसम नै खाए जनप्रतिनिधिले डिलासैनी ७ मा नै पालिका हुनुपर्छ भनेर । तर पछि पालिकाको केन्द्र अचानक सारियो, सम्पर्क कार्यालयको नाममा । अध्यक्ष पालको सक्रियतामा ७ नम्बर वडामा राख्ने भनिएको केन्द्रलाई ३ नम्बर वडामा सारियो । जुन पालको गृह गाउँ पर्छ ।
पहिलै तोकिएको र जनप्रतिनिधिले निर्णय गरिसकेको निर्णय उल्टिएपछि विवाद बढ्दै गयो । नागरिक समाजले आन्दोलन सुरु ग¥यो । त्यसको संयोजन जयराज जोशीले गरे । उनलाई अन्य दलको पनि समर्थन थियो । जयराज पछि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर पालिका सभापति भए ।
तर आन्दोलनले मूर्त रूप तब लियो तब यो आन्दोलनमा सन्तोषको टिम पनि समावेश भयो । एमालेमा हुँदादेखि नै सन्तोषहरूको अडान थियो, पालिका तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्छ । तर, विवाद यसरी बढ्यो कि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । पछि नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले डिलासैनी ७ मै केन्द्र हुनुपर्ने निर्णय भयो ।
यसमा सन्तोषसँगै अन्य न्यायिक आन्दोलनका सदस्यहरूको ठूलो साथ र सहयोग छ । यो घटनापछि पालसँग सन्तोषको टसल झनै बढेर गयो भनिन्छ ।
पालिका केन्द्रको आन्दोलन सर्वोच्चसम्म पुग्दा सन्तोषले वडा नम्बर ४, ५, ६, ७ का जनताको मन जितिसकेका थिए । सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका जनतालाई सन्तोषकै नेतृत्वमा जनश्रमदानबाट सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भयो । जनताको सहयोग र व्यक्तिगत खर्चबाट उनले १३ किलोमिटर बढी सडकको ट्र्याक खोले ।
सन्तोषकै कारण अहिले उपभोग्य सामाग्री, निर्माण सामाग्री ढुवानीमा सहज भएको छ । जसरी नेपालमा लोडसेडिङ हट्दा कुलमान घिसिङलाई जनताले सम्मान दिएका थिए, त्यसरी नै डिलासैनीमा सडक पुग्दा सन्तोषलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
यसपछि भने पार्टीले सिफारिस नगरे पनि स्थानीय जनताले पालिकामा सन्तोष नै आउनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरे ।
जनतामा यो अभियान चलाउने हिम्मत र आँट सन्तोषले नै भरेका थिए । नत्र पालिकाभरि अध्यक्ष पालको मनोमानी विरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत अरू कसैले गर्न सकेका थिएनन् । पालिकाबाट योजना पाउने लोभ तथा डरका कारण बोल्नै सकेका थिएनन् । तर, सन्तोषले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध बोलेपछि जनताले उनको साथ दिए । जसका कारण अबको पाँच वर्षका लागि पालिका हाँक्नेछन् उनले ।
सन्तोषले स्वतन्त्र प्यानल बनाएर आफ्नै एमाले र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरे । वडा नम्बर ४, ५ र ७ मा त सन्तोषको स्वतन्त्र टिमबाट वडाध्यक्षको प्यानलै विजयी भए । धरान र काठमाडौंमा लौरोले मूलधारका दललाई कुटिरहँदा बैतडीको डिलासैनीमा पुतली चम्कियो ।
वडा नम्बर ४ मा हरि पन्त, वडा नम्बर ५ मा यज्ञ भट्ट र वडा नम्बर ७ मा प्रकाशमणि भट्ट पनि प्यानलसहित स्वतन्त्र हैसियतमा विजयी भए ।
९ हजार आसपासमा मत खसेको डिलासैनी पालिकामा मतगणना हुँदा सुरुका तीन वडामा सन्तोषको मत २६५ पुग्दा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार लोकेन्द्रबहादुर रानाको १८१३ पुगिसकेको थियो । अर्का उम्मेदवार एमालेका अक्कल बहादुर रानाको १७१५ मत पुगेको थियो ।
तर वडा नम्बर ४ को गणना सम्पन्न हुँदा उनले कम ब्याक गर्न सुरु गरे । स्वतन्त्र वडाध्यक्षका उम्मेदवार प्यानलसहित विजयी भएको सो वडामा सन्तोषले ५४५ मत पाउँदा गठबन्धनका उम्मेदवारले २०२ र एमाले उम्मेदवार जम्मा १३५ मत पाए ।
वडा नम्बर ७ को मतगणना हुँदा समेत ३ सय मतले पछि परेका सन्तोषले त्यहाँ १०१७ मत प्राप्त गरे । जहाँ गठबन्धन उम्मेदवारले १६६ र एमाले उम्मेदवारले १४५ पाए । गठबन्धन उम्मेदवारले २६५१ र एमाले उम्मेदवारले २५५७ पाउँदा सन्तोषले फिल्मी शैलीमा कम ब्याक गर्दै समग्रमा ३१८९ मतका साथ विजयी हासिल गरे ।
जनताले पाँच वर्षका लागि सन्तोषलाई निर्वाचित गर्नुअघि पनि ठूलो चुनौतीसँग थिए । अहिले निर्वाचित भएपछि झनै ठूलो चुनौतीसँग छन् । पालिकाका गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रो छन्, जसलाई अबको पाँच वर्षमा फत्ते गर्नुपर्नेछ सन्तोषले ।
सन्तोष भन्छन्, ‘अहिले हामी टेलिकमको टावर निर्माणका लागि लागिरहेका छौँ । साथीहरू फिल्डमा खटिनुभएको छ । अब पहिलो काम यहीँबाट सुरु गर्दै छु ।’ सन्तोषका अनुसार अचेल दिउँसो मात्रै अलिअलि नेटवर्क टिप्न सक्ने अवस्था छ, त्यो पनि घाम परेको समयमा मात्रै । राति भने नेटवर्क नै टिप्दैन ।
पाँच वर्षअघि यस्तो अवस्था नभएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले दिउँसै कुरा गर्न पाउनु भनेको भाग्यको कुरा हो । तर अब यो समस्यालाई हामी चाँडै समाधान गर्नेतिर लागेका छौँ ।’
गाउँपालिकामा समस्या नेटवर्कको मात्रै छैन । डिलासैनीसँग सिमाना जोडिएको दार्चुलामा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना छ । तर, छेवैको डिलासैनी पालिकाको ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अँध्यारोमा छन् । सडक विस्तारको अवस्था राम्रो छैन । भर्खरै ट्र्याक खुले पनि त्यसलाई अझैँ व्यवस्थित गरेर कालोपत्रे गर्दै सडक सञ्जाललाई केन्द्रसम्म जोड्न बाँकी नै छ ।
खानेपानीको मूलहरू भए पनि गाउँमा पुर्‍याउन नसक्दा अवस्था जर्जर छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने सन्तोष बताउँछन् । भन्छन्, ‘अबको पाँच वर्ष म यी मूल मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छु । साथै हाम्रो पालिकाको आफ्नै भवन छैन, वडामा पनि आफ्नै भवन छैन । अघिल्लो स्थानीय सरकारले केही गरेन । त्यो काम पनि गर्नुपर्ने दायित्वभित्र छन् ।’
सन्तोषले पार्टीबाट विद्रोह गरेर जनताको समर्थनमा जित निकाले । यसबीचमा अब उनको भूमिका फेरिएको कारण पाँच वर्ष जनताकै सेवा गर्ने सोचमा छन् । उनलाई एमाले पार्टीले निष्कासन गरेको छैन तर पनि उनी पार्टीमा फर्केर काम गर्ने कि स्वतन्त्रै बस्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।
प्रकाशित: २०७९ जेठ ९ गते १९:३८
3 thoughts on “धरान र काठमाडौंको लौरोभन्दा जब्बर डिलासैनीको पुतली, यसरी सम्भव भयो सन्तोषको लोभलाग्दो जित”
Ritu silwal says:
May 23, 2022 at 8:59 pm
सुरेन्द्र पाल लाइ कारबाही नभई पार्टीमा जान हुन्न
May 24, 2022 at 4:01 am
Shishir kumar rokaya says:
May 24, 2022 at 11:39 am
Tapae swotantra batae kam garnush sir yadi fere paatiko khelo meloma lagnuvayo vane tapae bikas premi vayara pani bikash garna saknu hinna tasartha tapae purna shwotanra ra nishwortha vayara kam garnunu hola safal kaaryakalko suvakamana ra ramro kam gardae janush aaudo5barsha paxiko chunabma pani jit ra safaltako agrim suvakamana always good luck
विराटनगर महानगरको कार्यपालिका निर्वाचन- गठबन्धनभित्र अन्तरघात, एमाले र स्वतन्त्रलाई लाभ
स्थानीय चुनावमा मधेस : फैलिए कांग्रेस-एमाले, खुम्चिए माओवादी-मधेसवादी (सिटसहित)
पोखरा महानगरको वडाध्यक्षमा ३ मतले हारेका थापाले हाले मुद्दा
रामेछापको चुनावी गणित- सिट र मतमा कुन दल बलियो ?
स्थानीय चुनावको मैझारो: ३५,०४५ पदमा कुन दललाई कति ? (विवरणसहित)
बुढीगंगामा पुन: मतदानको निर्णय छानबिन समितिको सुझावविपरीत (पूर्णपाठ)
महान्यायाधिवक्तालाई स्पष्टीकरण माग्न आयोगको सिफारिस, दाजुलाई मेयर जिताउन पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष
स्थानीय तह निर्वाचन : कुन दलका कति आए जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तह निर्वाचन : ३८५ स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित
लोक दोहोरी गायिका दिलमाया मृत्यु प्रकरण : ‘सँगै थिएँ तर हत्या गरेको होइन’
मैदानमा ब्राजिलका रोनाल्डिन्होलाई रोक्दै नेपालका रोहित
लागू औषधसहित धनगढीबाट चार जना पक्राउ
बुटवल उपमहानगरको निर्णयविरुद्ध व्यापार संघको आपत्ति
नयाँ मन्त्रीहरूको शपथग्रहण सोमबार बिहान
एमालेद्वारा बागमती प्रदेशको बजेट पुस्तक फिर्ता
नेकपा एसमा नयाँ ट्वीस्ट, प्रेम आलेसहित ६ सांसदले गरे हस्ताक्षर फिर्ता
हट्न लागेका मन्त्रीले बुझाए नेकपा एसमा नयाँ मन्त्रीको सूची
अचेल तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ ?
विमला राईले आधा घण्टा उभिएर प्रश्न सोधिरहिन्, मन्त्री आले जवाफ नदिई ‘टाप’ (भिडिओ)
पार्टीनिर्णय विरूद्धको ‘जंग’बाट आलेसहित ६ सांसद किन भए ‘ब्याक’ (पत्रसहित)
एमालेका १० भाइलाई नेपालको चेतावनी – तिमीहरु दास हौ, हामीलाई धारेहात नलगाऊ (भिडिओ)